Mpamatsy milina zezika Granulator Rotary Drum NPK mpamatsy sy orinasa | YiZheng
Inona no atao hoe Rotary Drum Compound Fertilizer Granulator Machine?
Rotary Drum Compound Fertilizer Granulator dia iray amin'ireo fitaovana fototra amin'ny indostrian'ny zezika mitambatra. Ny fomba fiasa lehibe dia ny ody miaraka amin'ny granulation lena. Amin'ny alàlan'ny rano na setroka sasany, ny zezika fototra dia voatsabo simika tanteraka ao anaty varingarina aorian'ny hamandoana azy. Ao anatin'ny dingana misy ranoka, ny fivezivezena mihodina amin'ny barika dia ampiasaina hanamboarana ny tsindry extrusion an'ny fitaovana ho an'ireo baolina. izy manontolo NPK Fanangonam-bokatra zezika tsipika famokarana misy:
Firafitry ny Rotary Drum Compert Fertilizer Granulator
Ny milina dia azo zaraina ho faritra dimy:
1) Fizarana bracket: ny vatan'ny vatana manontolo amin'ny ampahan'ny tohanan'ny bracket, ny hery dia lehibe kokoa. Noho izany ny ampahany misy kodiarana milina dia ampiasaina amin'ny takelaka vy vy, ampidinin'ny fantsona, ary amin'ny alàlan'ny fifehezana kalitao henjana sy ny takiana manokana momba ny Process, dia nahatratra ny tanjon'ny fampiasana ny masinina. Ho fanampin'ny zava-dehibe kokoa dia miorina amin'ny talantalana fikarakarana, noho ny fiheverana ny vatany dia hanana fikorontanana lehibe kokoa, mamboly manokana mifantina anti-harafesina, fitaovana maharitra mahazaka akanjo, manatsara be ny fiainana ny ny masinina, ny iray hafa koa dia ampiasaina amin'ny fandefasana ny iray amin'ireo lafiny efatra amin'ny kodiarana miaraka amina farango mihantona, mora ny fandefasana ary ny famoahana ireo entana.
2) Fizarana fandefasana: ny ampahany mitondra fiara granulator iray manontolo dia tena tsara ho an'ny vatana iray manontolo amin'ny asa manana an'io tsipika io. Ny rafitra fandefasana dia vita amin'ny vy vita amin'ny vy tsara, ary amin'ny alàlan'ny fepetra takiana kalitao henjana. Ampidiro ao anaty boaty fandefasana Ao amin'ny motera lehibe sy reducer dia voafantina ireo vokatra fanavotana nasionaly ISO, kalitao azo antoka. Ny motera dia manosika ny pulley, ny fehin-kibo V, ny fandefasana reducer mankany amin'ny spindle, mba hiasa ny vatana, izay mampihena ny reducer ao amin'ny ampela ampiasain'ny asa, ny fampiasana nylon dia manoratra ny dingana mpampitohy manaikitra Drive.
3) fitaovam-piadiana lehibe: raikitra amin'ny vatana, ary nifify nify fitaovam-pandefasana, ny mifanohitra amin'izay no miasa ny vatana, ny fampiasana fitaovana maharitra mahatohitra haitao teknolojia, mba ho lava kokoa ny masinina.
4) Roller: raikitra amin'ny lafiny roa amin'ny vatana hanohanana ny vatana iray manontolo.
5) Ny ampahany amin'ny vatana: ny granulator iray manontolo dia ny ampahany manan-danja indrindra amin'ny vatana, izay vita amin'ny takelaka vy vita amin'ny karbaona avo lenta, kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny vy na volo vy tsy mahazaka asidra, hahatratrarana ny soritra mandeha ho azy, miala amin'ny fivontosana , manafoana ny fitaovana fanapahana nentim-paharazana, ary amin'ny alàlan'ny fifehezana kalitao henjana sy fitakiana dingana manokana hahatratrarana ny tanjon'ny masinina ampiasaina.
Mampiavaka ny Rotary Drum Compound Fertilizer Granulator
1. Ny tahan'ny granulate dia hatramin'ny 70%, ny habetsahan'ny fiverenana kely ihany, ny haben'ny poti-bokatra kely, dia azo alaina indray.
2. Atsofohy ao anaty lafaoro entona, manatsara ny hafanan'ny fitaovana, ny fitaovana ao anaty baolina aorian'ny ambany ny rano, manatsara ny fahombiazan'ny fanamainana;
3. miaraka amin'ny plastika injeniera vita amin'ny fingotra ho an'ny firakofana, ny akora tsy mora miraikitra, ary mitana andraikitra amin'ny insulated anti-corrosion;
4. Vokatra lehibe, fanjifana herinaratra ambany, vidin'ny fikojakojana ambany.
Mahafantatra bebe kokoa momba ny fizotry ny famokarana zezika rotary amponga rotary NPK
Ny zezika kompana dia novokarin'ny granulation drum. Ny zezika marobe dia afaka manome otrikaina ho an'ny voly amin'ny fomba rehetra. Ny fomba fanao dia ny famokarana simika ireo otrikaina lehibe (toy ny N, P, K ary ireo singa hafa manara-penitra) ilain'ny voly, miaraka amin'ny azota, fosforôra, potasioma ary akora simika hafa mety amin'ny fambolena voa, ary avy eo amin'ny alàlan'ny fampiharana ireo vokatra ho ny tany. Mitroka otrikaina avy amin'ny tany. Ny fitsipiky ny fizotrany dia misy ny azota, ny phosforus, ny potasioma poti, ny sombin-tsolika amoniôma sulfate, ny potiota hidrôzenina hidrôphôly fôpôly ary ny zezika zezika mifangaro: voalohany, zezika phosforus (fantatra amin'ny siansa hoe "calcium superphosphate") no amoniôna; akora vita amin'ny vovoka isan-karazany dia voadio, maina ary mangatsiaka mba hamokarana zezika mitambatra. Ny fizotry ny teknolojia ny tsipika famokarana zezika mitambatra dia azo zaraina ho akora akora, fifangaroana akora, granulasi akora, fanamainana sombin-javatra, fanamafisana ny sombintsombiny, fanamafisana ny sombiny, fametahana vokatra vita ary fonosana vokatra farany.
Safidy maodelika zezika an'ny Rotary Drum
Teo aloha: Granulator zezika biolojika karazana vaovao
Manaraka: Disc Organizer & Compound Granulator zezika